Bible—Emu Nsɛm Nyinaa Yɛ Nokware
ASƐM A ƐDA SO Bible​—‘Efi Onyankopɔn Honhom Mu’ Ampa?
ASƐM A ƐDA SO Bible​—Emu Nsɛm Nyinaa Yɛ Nokware
MMOA A WƆDE MA ABUSUA NO Efie Nnwuma Ho Hia
Ehon Nkwaadɔm a Ɛwɔ Wo Nsono Mu​—Ɛyɛ Wo Nipadua “Adwene a Ɛto So Mmienu” Anaa?
NSƐM A WOBISABISA Obi a Ɔyɛ Program Gu Kɔmputa So Kyerɛkyerɛ Ne Gyidi Mu
BIBLE NO ADWENE Abɔfo
WƆBƆE ANAA? Ɛpo Mu Ahweaa Ho Nhwi
Hena Ne Bible no Kyerɛwfo?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Nyan! | No. 3 2017
ASƐM A ƐDA SO | ƐYƐ AMPA SƐ BIBLE FI ONYANKOPƆN HƆ?
Bible​—Emu Nsɛm Nyinaa Yɛ Nokware
Emu Nsɛm ne Nyansahu Hyia Pɛpɛɛpɛ
ƐWOM, Bible nyɛ nyansahu nhoma, nanso sɛ ɛka abɔde ho nsɛm a, ɛka no pɛpɛɛpɛ. Wo deɛ ma yɛmfa wim tebea ne awosu nyɛ nhwɛso.
EWIM TEBEA HO NSƐM​—NEA ƐMA NSU TƆ
EWIM TEBEA HO NSƐM
Bible ka sɛ: ‘Onyankopɔn boaboa nsukoko ano; ɛtɔ sɛ osu ne obosu, na ɛsosɔ fi omununkum mu.’​—Hiob 36:27, 28.
Ɛha yi, Bible ma yehu akwan atitiriw mmiɛnsa a nsu fa so di kyinhyia. Onyankopɔn a ɔma yenya owia hyew no ‘boaboa nsukoko ano,’ na ɔnam (1) suwusiw so na ɛyɛ saa. Afei suwusiw a ɛforo kɔ soro no (2) dan yɛ mununkum. Mununkum no nso nan a, na (3) atɔ agu asase so sɛ nsu anaa biribi foforo. Seesei mpo, anwonwakwan a nsu fa so tɔ no, animdefo a wɔhwɛ wim tebea mu no nhuu mu nyinaa nwiei. Anikasɛm ne sɛ, Bible bisa sɛ: “Hena paa na obetumi ate omununkum ntrɛwmu ase.” (Hiob 36:29) Nanso Ɔbɔadeɛ no deɛ, onim sɛnea nsu di kyinhyia no mu nyinaa. Ɛno nti, ɔhwɛ maa obi kyerɛw ho nsɛm pɛpɛɛpɛ wɔ Bible mu. Ɔyɛɛ wei bere tenteenten ansa na nnipa nam nyansahu so rekyerɛkyerɛ mu kakra.
AWOSU​—NEA ƐMA MOGYATƆW DAN ONIPA MŨ
Ɔhene Dawid ka wɔn a wɔkyerɛw Bible no ho. Ɔka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ: “Bere a meyɛ mogyatɔw mpo no, w’aniwa huu me, na wɔkyerɛw m’akwaa nyinaa wɔ wo nhoma mu.” (Dwom 139:16) Dawid yɛɛ anwensɛm bi. Ɔkaa sɛnea mogyatɔw nyin ho asɛm. Ɔkyerɛɛ sɛ ɛho akwankyerɛ wɔ “nhoma” bi a na ɛwɔ hɔ dedaw ansa na wɔrebɔ ade mu. Nea ɛyɛ nwonwa ne sɛ, wɔkyerɛw saa asɛm yi bɛyɛ mfe 3,000 a atwam ni!
Nanso, afe 1801 kosi afe 1900 ntam hɔ yi ara na afifide ho ɔbenfo Gregor Mendel a ofi Austria huu awosu ho nsɛm kakra. Afei nso, April 2003 yi ara na nhwehwɛmufo tumi yɛɛ onipa awosu mu nhwehwɛmu huu mu nneɛma nyinaa. Saa awosu yi mu na akwaa ahorow a ɛkeka bom yɛ nipadua no ho nsɛm nyinaa wɔ. Nyansahufo aka awosu ho asɛm sɛ ɛte sɛ nsɛm asekyerɛ nhoma a nsɛmfua wom. Nkyerɛwde ahorow te sɛ a, b, d, . . . na ɛkeka bom yɛ nsɛmfua no. Enti nsɛmfua no na ɛkeka bom yɛ awosu ho akwankyerɛ no. Saa akwankyerɛ yi so na nipadua no akwaa te sɛ adwene, koma, ahrawa, nsa ne nan nam so ba. Emu biara wɔ bere pɔtee a ɛba, na ɛba nnidiso nnidiso. Sɛ nyansahufo frɛ awosu anaa nea ɛma obi yɛ onipa mũ no sɛ “nkwa nhoma” a, ɛfata paa. Ɛyɛɛ dɛn na Dawid a ɔno nso kyerɛw Bible no bi no tumi kaa ne nsɛm no pɛpɛɛpɛ saa? Ná ɔbrɛ ne ho ase, enti ɔkaa sɛ: “Yehowa honhom nam me so kasae, na n’asɛm wɔ me tɛkrɛma so.” *​—2 Samuel 23:2.
Ɛka Daakye Nsɛm Pɛpɛɛpɛ
ƐYƐ den paa sɛ obi betumi akyerɛ bere a ahenni anaa ɔman bi bɛsɔre ne bere a ɛbɛhwe ase. Saa ara nso na ɛnyɛ mmerɛw sɛ obi betumi akyerɛ ɔkwan a ɛbɛfa so aba ne sɛnea ɛbɛhwe ase. Nanso Bible dii kan kaa sɛnea wɔbɛsɛe ahemman ne nkurow bi a ɛyɛ den ho nsɛm nyinaa too hɔ. Ma yensusuw emu mmienu pɛ ho nhwɛ.
BABILON AHWEASE NE NE SƐE
Ná tete Babilon yɛ ahemman a ɛyɛ den. Edii aman a na ɛwɔ Asia atɔe fam no so mfehaha pii. Eduu bere bi no, na ɛno ne kurow a ɛso paa wɔ wiase. Nanso Onyankopɔn honhom kaa Bible kyerɛwfo Yesaia ma ɔhyɛɛ nkɔm bi. Ɔkyerɛɛ sɛ ɔkatakyie bi a wɔfrɛ no Kores na obetu Babilon agu. Ɔde kaa ho sɛ ɛbɛdan amamfõ a obiara rentena hɔ bio. Mfe 200 akyi ansa na nkɔmhyɛ yi reba mu. (Yesaia 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2) Saa asɛm yi, enti ɛbaa mu ampa?
Da koro anadwo bi, October 539 A.Y.B. no, Kores Ɔkɛseɛ no dii Babilon so nkonim. Bere bi akyi no, nsuka a na wɔde emu nsu gugu mpɔtam hɔ nnɔbae so no mu sisiwii efisɛ na obiara nni hɔ a ɔbɛtew mu. Eduu afe 200 Y.B. no, wɔkyerɛ sɛ na ɛhɔ da mpan a obiara nte hɔ. Ɛde besi nnɛ, sɛ wokɔ Babilon a, adan a abubu nko ara na wubehu. Babilon ‘adan amamfõ’ sɛnea Bible kae no pɛpɛɛpɛ.​—Yeremia 50:13.
Nsɛm a na ɛbɛba daakye yi, ɛhe na Bible kyerɛwfo yi nyaa ne nyinaa fii pɛpɛɛpɛ saa? Bible ka sɛ, ɛyɛ “Babilon ho atemmusɛm a Amus ba Yesaia hui” wɔ anisoadehu mu.​—Yesaia 13:1.
NINIWE​—‘ƐBƐWO WOSEE SƐ SARE SO’
Wɔkyerɛ sɛ, na Asiria Ahemman no ahenkurow Niniwe mu adan yɛ fɛ paa. Ná akwan a ɛtrɛw, turo akɛse, asɔrefie ne ahemfie akɛse wɔ kurom hɔ. Ne nyinaa akyi, odiyifo Sefania hyɛɛ nkɔm sɛ saa kurow fɛfɛ yi bɛdan “amamfõ, na ɛhɔ bɛwo wosee sɛ sare so.”​—Sefania 2:13-15.
Bɛyɛ mfe 700 ansa na wɔrewo Yesu no, Babilon ne Media asraafo boom sɛee Niniwe pasaa. Nhwehwɛmu bi kyerɛ sɛ, kurow a wɔsɛee no yi “yerae koraa mfe 2500.” Eduu bere bi no, na ebinom nnye nni mpo sɛ na kurow bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Niniwe! Bɛyɛ mfe 200 a atwam yi ara na wɔn a wotutu fam hwehwɛ tetefo nneɛma mu kohuu Niniwe amamfõ. Ɛnnɛ, nkurɔfo resɛe hɔ nneɛma, na nea aka no nso reporɔw. Wei nti, kuw a ɛboa ma wɔhwɛ tete nneɛma so wɔ wiase nyinaa abɔ kɔkɔ sɛ: “Anhwɛ a, Niniwe amamfõ no bɛsan ayera koraa.”​—Global Heritage Fund.
Ɛhe na Sefania nyaa ne nsɛm yi nyinaa fii ansa na ɛreba mu? Sefania gye toom sɛ ɛyɛ “Yehowa asɛm a ɔka kyerɛɛ [no].”​—Sefania 1:1.
Nsɛmmisa a Ɛho Hia Paa No, Bible Ma Yenya Ho Mmuae
NSƐMMISA a ɛho hia paa no, Bible ma yenya ho mmuae a ɛtɔ asom. Wo deɛ, hwɛ nea edidi so yi.
ADƐN NTI NA BƆNE NE AMANEHUNU REKƆ SO WƆ WIASE SAA?
Wohwɛ Bible mu a, wubehu sɛ wɔaka bɔne ne amanehunu ho nsɛm pii. Bible kyerɛkyerɛ mu sɛ:
“Onipa di onipa so ma ewie no bɔne.”​—Ɔsɛnkafo 8:9.
Nyansakorɔn ne amammu bɔne ama nnipa ahu amane bebree.
“Asiane to wɔn nyinaa bere a wɔnhwɛ kwan.”​—Ɔsɛnkafo 9:11.
Nneɛma a yɛnhwɛ kwan betumi ato obiara wɔ baabiara prɛko pɛ. Ebetumi ayɛ yare a emu yɛ den, akwanhyia, anaa atoyerɛnkyɛm.
“Ɛnam onipa biako so na bɔne baa wiase, na owu nam bɔne so bae.”​—Romafo 5:12.
Bere a Onyankopɔn bɔɔ ɔbarima ne ɔbaa mfiase no, na bɔne biara nni wɔn ho, na na owu nso nni hɔ. Nanso bere a wɔboapa yɛɛ asoɔden tiaa wɔn Bɔfo no, “bɔne baa wiase.”
Ɛnyɛ nea enti a nnipa hu amane nko ara na Bible ka ho asɛm. Ɛhyɛ bɔ sɛ, Onyankopɔn beyi bɔne afi hɔ koraa ama nnipa, na “ɔbɛpopa wɔn aniwam nusu nyinaa, na owu nni hɔ bio, na awerɛhow ne osu ne yaw nso nni hɔ bio.”​—Adiyisɛm 21:3, 4.
YEWU A ƐHE NA YƐKƆ?
Bible kyerɛkyerɛ mu sɛ sɛ obi wu a na wawu, onnim hwee na ontumi nyɛ hwee nso. Ɔsɛnkafo 9:5 ka sɛ: “Ateasefo nim sɛ wobewuwu; awufo de, wonnim biribiara.” Sɛ yewu a, yɛn ‘nsusuwii nyinaa yera.’ (Dwom 146:4) Enti sɛ yewu a, yɛn adwene no gyae adwuma yɛ koraa, na yɛn akwaa nyinaa nyɛ adwuma bio. Ɛba saa a, yentumi nyɛ biribiara, yɛnte nka, na yentumi nsusuw nneɛma ho nso.
Nanso ɛnyɛ tebea a awufo wom nko ara ho asɛm na Bible ka. Ɛsan ka anigyesɛm bi a ɛbɛba daakye ho asɛm. Ɛne sɛ, wɔn a wɔada hatee wɔ owu mu no benya owusɔre asan aba nkwa mu bio.​—Hosea 13:14; Yohane 11:11-14.
Bible ma yehu sɛ Yehowa Nyankopɔn na ɔbɔɔ ɔbarima ne ɔbaa. (Genesis 1:27) Enti Adam, ɔbarima a odi kan no, Bible frɛ no “Onyankopɔn ba.” (Luka 3:38) Onyankopɔn a ɔyɛ wɔn soro Agya no, biribi nti na ɔbɔɔ wɔn. Ɔbɔɔ nnipa sɛ wɔne no mfa adamfo, na wɔnyɛ nneɛma a mfaso wɔ so a ɛbɛma wɔn ani agye wɔ asase so daa. Sɛnea Onyankopɔn bɔɔ nnipa nti, nyamesom wɔ obiara mu. Ɛno nti na ɛyɛ a yɛhwehwɛ Onyankopɔn akyi kwan no. Bible ka sɛ: “Anigye ne wɔn a wonim wɔn honhom mu ahiade.”​—Mateo 5:3.
Bio nso, Bible aka sɛ: “Anigye ne wɔn a wotie Onyankopɔn asɛm na wodi so!” (Luka 11:28) Bible ka Onyankopɔn ho asɛm kyerɛ yɛn. Ɛsan boa yɛn ma yenya anigye wɔ yɛn asetena mu, na ɛma yenya daakye ho anidaso nso.
Onyankopɔn na Ɔkyerɛw Bible​—Wuhu No a Ɛbɛboa Wo Sɛn?
BERE a nnipa ɔpepem pii a wɔwɔ wiase hwehwɛɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Bible mu nsɛm yɛ nokware no, wɔabehu sɛ Bible nyɛ tete nhoma bi kɛkɛ. Wogye di paa sɛ Bible yɛ Onyankopɔn Asɛm a wɔnam ne honhom so kyerɛwee. Ɛno na ɔnam so ne nnipa di nkitaho. Wo nso, woka wɔn a ɔkyerɛw maa wɔn no ho! Onyankopɔn nam Bible so reka akyerɛ wo sɛ sua ne ho ade na hu no, na wo ne no mfa adamfo. Bible aka sɛ: “Mommɛn Onyankopɔn na ɔbɛbɛn mo.”​—Yakobo 4:8.
Sɛ wohwehwɛ Bible mu yiye a, wubehu biribi a ɛyɛ anigye paa. Ɛyɛ dɛn? Sɛ wokenkan nhoma bi a, wutumi hu ɔkyerɛwfo no adwene a okura. Saa ara na sɛ wokenkan Bible nso a, wubehu Onyankopɔn a ɔno ne Bible no Kyerɛwfo no nsusuwii ne sɛnea ɔte nka wɔ nneɛma ho. Wo deɛ, hwɛ sɛ woahu wo Bɔfo no adwene ne sɛnea ɔte nka wɔ nneɛma ho! Ɛnyɛ ɛno nko, Bible bɛma woahu nneɛma foforo nso. Ebi ni:
Onyankopɔn din, sɛnea ɔte, ne ne su ahorow a ɛyɛ fɛ.
Nea Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama nnipa.
Nea woyɛ a, wubetumi ne Onyankopɔn afa adamfo.
W’ani begye sɛ wubesua nneɛma pii aka ho anaa? Yehowa Adansefo ani begye ho sɛ wɔbɛboa wo. Wobetumi ayɛ nhyehyɛe ama obi ne wo asua Bible no a wuntua hwee. Wei betumi ama woabɛn Yehowa Nyankopɔn a ɔkyerɛw Bible no paa.
Nyan! yi ama yɛanya adanse kakra a ɛkyerɛ sɛ Bible no fi Onyankopɔn honhom mu. Sɛ wopɛ sɛ wuhu pii a, hwɛ nhoma a yɛato din Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu? no ti 2. Yehowa Adansefo na wotintimii. Ɛsan wɔ www.jw.org/tw anaa skan ahyɛnsode yi
Wopɛ nso a hwɛ video a yɛato din Hena Ne Bible no Kyerɛwfo? Ɛwɔ www.jw.org/tw
Kɔ NHOMA > VIDEO
^ nky. 10 Wohwɛ Bible mu a, Onyankopɔn din de, Yehowa.​—Dwom. 83:18.
Nyansahu ne Bible Hyia?
Nyansahu ho asɛm a Bible ka no, mfomso bi wɔ mu anaa?
Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wusua Bible?
Nsɛmmisa a ɛkyere adwene paa no, Bible reboa nnipa mpempem pii ama wɔanya ho mmuae. Wo nso, wopɛ sɛ ɛboa wo saa anaa?
No. 3 2017 | Ɛyɛ Ampa sɛ Bible Fi Onyankopɔn Hɔ?
NYAN! No. 3 2017 | Ɛyɛ Ampa sɛ Bible Fi Onyankopɔn Hɔ?
Nkwammoaa—Nwomakorabea a Ɛwɔ Nkwa!
Daakye Asɛm—Hena na Onim?